Mushtaaq Cabdi oo si qiiraysan uga hadashay dacaayad laga faafiyey iyada Barkhad Batuun (Daawo) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Mushtaaq Cabdi oo si qiiraysan uga hadashay dacaayad laga faafiyey iyada Barkhad...
Mushtaaq Cabdi oo si qiiraysan uga hadashay dacaayad laga faafiyey iyada Barkhad Batuun (Daawo)
(Hargaysa) 27 Maarso 2022 – Gabar la yiraahdo Mushtaaq Cabdi Naano ayaa saxaafadda la hadashay kaddib markii aad loo qaad qaaday arrin ku saabsan iyada iyo Xildhibaanka Barkhad Jaamac Batuun, iyadoo sheegtay in ay Barkhad is qabaan waxa loo beegsanayana ay yihiin dhaqamo duug ah oo dano siyaasadeed lagu qarinayo.
Gabadhan ayaa sheegtay in ay moodaysey inuu koray wacyiga dadwaynuhu balse ay la yaabban tahay sida xitaa qoyskeedii oo uu Barkhad ka doontay oo si sharaf leh u siiyey loogu dirdirayo oo dhinacoodii laga soo maro si iyaga loo kala geeyo.
Waxay sheegtay in intii aanay arrintu siyaasadda gaarin oo aan kufsi iyo been laga sheekaynin markii hore ay dadku si hoose oo heer dhaqan ah ah u cadaadinayeen iyadoo haysa farriimo ay sheegtay inaan waxa ku qoran afka lasoo marin karaynin.
Waxay sheegtay in Barkhad oo ay u dhashay ilmo 6-bilood jir ah ay sifo sharci ah isku qabaan. ”Warqaddii aannu isku guursanney waa taas waana dareemi kartaan waxa igu kallifaya inaan soo bandhigo warqaddaasi iyadoo aan xaq la iigu lahayn inaan ka hadlo arrimeheenna gaarka ah. Nimanka eedda ku saabsan Barkhad ma gayo gabadha lehna waxaan leeyahay dadyohow dib iskugu laabta,” ayay tiri iyadoo sheegtay inay mabda’eeda ku adkaysanayso waloow ay culaysyo badan wajahayso.
”Ilaahay baa idinku xisaabi doona kuwa xitaa noo gaarey inay duraan ilmaha aannu dhalnay ee sheegay inaysan xalaal ku dhalan.” ayay raacisay iyadoo aad u saluugtey dhaqanka qallagsan ee faasidka ah ee sheegaya in uu qofi mid kale uga fiican yahay dhalasho ahaan.
Mushtaaq ayaa ka jawaabaysey warar maalmihii dambe aad u wareegayey baraha bulshada oo ku saabsan in la kufsaday, in la sixray, inaysan is qabin iyo dacaayado kale oo ay sheegtay in laga faafiyey.
Previous articleRuushka oo 3 gantaal ku dhuftay meel 200 oo mayl u jirta halka uu joogo MW Maraykanka
Next articleJeneral Polish ah oo ku baaqay in la sheegto gobol Ruushka ka tirsan & Ruushka oo ka caroodey (Dib u eegis taariikheed)